Appodeal, mahazoa vola amin'ny fampiharana anao raha mpamorona | Vaovao IPhone
Appodeal, fomba iray hafa hanangonam-bola ny fampiharana anao raha mpamorona ianao
Nacho | | Fampiharana iPhone
Ankehitriny fa ny maodely freemium dia natsangana tanteraka tao amin'ny App Store, tsy maintsy misy mpamorona maro kokoa atolory maimaim-poana ny fampiharana anao ary ataovy amin'ny fomba hafa, na amin'ny fanampiana amin'ny fividianana fampiharana, dokam-barotra na roa.
Raha ny resaka dokam-barotra dia manana ny Google ho goavambe voalohany isika ary hatramin'ny vao tsy ela izay dia nanolotra ny sehatra iAd ihany koa i Apple vao tsy niasa intsony. Raha mpamorona ianao ary mitady safidy vaovao, Appodeal dia mety ho lasa safidy iray hafa hahazoana vola miaraka amin'ireo fampiharana anao.
Raha lasa anisan'ity ianao serivisy fanaovana dokambarotra finday, Appodeal hanome anao sombin-kaody izay tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny app anao ary hanangona karazana statistika rehetra izay, ankoatry ny fanampiana anao hahafantatra tsara ny mpampiasa anao, dia hanampy ny Appodeal hitantana ny doka amin'ny fomba tsara indrindra ihany koa, mampiseho doka mifandraika izay hampitombo ny vola miditra azonao isam-bolana.
Ny fitantanana ny doka sy ny tambajotra fanaovana dokambarotra dia mandeha ho azy tanteraka ary mangarahara amin'ny mpamorona. Ny algorithm an'ny Appodeal dia mitandrina ny zava-drehetra ary tsy mila mieritreritra afa-tsy ny anjara asanao mpamorona ianao.
Ny rafitry ny doka Appodeal dia mifototra amin'ny eCPM maodely, izany hoe, vidiny mahomby isaky ny fahatsapana an'arivony. Misaotra an'io fa afaka manisa mora foana ny zava-bita ateraky ny sora-baventy nomena isika rehefa aseho im-1.000 XNUMX amin'ireo mpampiasa.
Arakaraka ny maha avo ny eCPM no avo kokoa ny vola miditra horaisintsika. Ohatra, ao amin'ny tranokala ofisialin'ny serivisy Azontsika atao ny mahita fa ny eCPM eo ho eo ho an'ny iOS dia manodidina ny $ 7,15 raha ho an'ny Android dia $ 3,72. Tsy ratsy mihitsy, sa tsy izany? Mazava ho azy fa mila tobim-pampiasa matanjaka izahay mba hamoahana karama.
Rehefa mahatratra ny fandanjana $ 20 na mihoatra isika, dia afaka mangataka ny fanangonana azy ary ao amin'ny kaontintsika ao anatin'ny telo na efatra andro. Amin'ny maha fomba fandoavam-bola azonay ampiasaina PayPal, Bitcoin na famindrana banky.
Anisan'ireo singa lehibe hanasongadinana ity sehatra ity:
fampisehoana tsaratsara kokoa ny habaka doka noho ny haitao fanelanelanana fandaharana
rafitra fandrosoana mandroso hananana ny fampahalalana rehetra ilaina
fampidirana ny adnetworks sy fifanakalozana lehibe (famenoana 100% mba tsy ho very hevitra)
fanatsarana mandeha ho azy ny doka
mangarahara sy malefaka amin'ny fandoavam-bola
SDK izay azo ampidirina ao anatin'ny adiny iray latsaka.
Raha mpamorona ianao dia fantatrao ny vidiny miteraka vola amin'ny asanao ka raha tsy fantatrao ny momba ny Appodeal dia azonao atao ny manome azy fotoana mampitaha raha toa ka mety aminao kokoa noho ny tambajotran-doka misy anao izao. Tsara foana ny manana safidy hafa ary antenaina fa hanampy anao hiteraka karama bebe kokoa isam-bolana izany.
Rohy - Appodeal
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Appodeal, fomba iray hafa hanangonam-bola ny fampiharana anao raha mpamorona ianao
Apple nandefa tamin'ny fomba ofisialy ny Apple Pay any Shina
Hamela anao hampiasa ny mpanjifanao mailaka tsy misy adiresy @ Gmail izao ny Gmail